2009-01-04 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Recycle Bin(​အ​မှိုက်​ပုံး) ​ဖျောက်​နည်း
​အဲ​ဒီ​မှာ Group policy ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ​အဲ​ဒီ​က​နေ Local Computer Policy -> User Configuration -> Desktop ​မှ Remove Recycle Bin icon from desktop(double click)>> setting ​ထဲ​က​နေ Enabled ​ကို ​ရွှေး​ပြီး ​အို​ကေ ​ပေး​လိုက်​ရင် ​ရ​ပါ​ပြီ။ ​ပြီး​ရင်​တော့ desktop ​ကို refresh ​တစ်​ချက်​လောက်​ပေး​လိုက်​ပါ။ ​အ​မှိုက်​ပုံး​ကြီး ​ပျောက်​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ်။
​ကျွန်​တော်​က Recycle bin ​ကို ​ဥ​ပ​မာ​ထား​၍ ​အ​စမ်း​ဖျောက်​ပြ​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​ထို​နည်း​တူ​စွာ ​ကျန်​တဲ့ icon ​လေး​များ​ကို​လည်း ​စိတ်​ကူး​ရှိ​သ​လို ​ဖျောက်​နိုင်​ပါ​တယ်။
Drive ​များ ​ဖျောက်​နည်း
​ဝင်း​ဒိုး​မှာ​ပါ​တဲ့ c ,d,e​စ​တဲ့ drive ​တွေ​ကို ​ဖျောက်​ထား​လို့ ​ရ​ပါ​တယ်။ recycle bin ​ဖျောက်​တုန်း​က​လို​ပဲ Group policy ​ထဲ​ဝင်​ပြီး User Configuration >> Administrative Templates >> Windows Explorer ​က​နေ Hide these specified drives in My Computer ​ကို double click ​နှိပ်​ပြီး ​မိ​မိ ​ဖျောက်​ထား​ချင်​တဲ့ drive ​တွ​ကို ​ရွှေး​ပြီး ​ဖျောက်​ထား​နိုင်​ပါ​တယ်။ ​ကျန်​တာ​တွေ​လည်း ​ဆက်​ပြီး ​ဥာဏ်​ရှိ​သ​လို ​လေ့​လာ​နိုင်​ပါ​တယ်။
​သူ​ငယ်​ချင်း​တစ်​ယောက်​က ​မေး​တာ​နဲ့ ​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ ...
​လင့်​တွေ​ကို "​ဒီ​မှာ" ​ဆို​ပြီး​တော့ ​ညွှန်း​တာ​မျိုး​ကို​ဆို​လို​တာ​ပါ ... ​ကို​ကြိုက်​တာ​ကို Select ​ပေး​ပြီး​တော့ ​ညွှန်း​တာ​မျိုး​ကို ​ဆို​လို​တာ​ပါ . ​ကဲ​စမ်း​ကြည့်​ရ​အောင်
​ပ​ထ​မ​ဆုံး Posting>> Create>> Edit Html ​ကို​ရောက်​ပြီ​ဆို​ရင်
Example .. ​ကျွန်​တော့်​သူ​ငယ်​ချင်း ​ညီ​နေ​မင်း ​ဟာ​ဆို​ရင် ​တော်​တော်​လေး​ကို ​ချစ်​စ​ရာ​အ​လွန်​ကောင်း​ပါ​တယ်..
​မ​ယုံ​ဘူး​ဆို​ရင်​တော့ "​ဒီ" ​ဆိုက်​လေး​ကို ​သွား​ကြည့်​လိုက်​ပါ​လား ...
​အဲ့​ဒီ့​နေ​ရာ​မှာ ​ကို​လို​ချင်​တဲ့ "​ဒီ" ​ဆို​တဲ့ ​စာ​လုံး​လေး​ကို selection ​ပေး​လိုက်​ပါ ..
​အဲ​ပြီး​ပြီ​ဆို​ရင်​တော့ ​ပုံ​မှာ​ပြ​ထား​တဲ့​အ​တိုင်း insert link ​က​လေး​ကို ​က​လစ်​နှိပ်​လိုက်​ပါ.
​အ​ပေါ်​က​ပြ​ထား​တဲ့​အ​တိုင်း box ​လေး​ပေါ်​လာ​ပြီ​ဆို​တာ​နဲ့ ​သူ​နဲ့​သက်​ဆိုင်​တဲ့ ​လင့်​လေး​ကို ​ဒီ box ​လေး​ထဲ​မှာ ​ရိုက်​ထည့်​လိုက်​ပါ.
​ကဲ​ဒါ​ဆို​ရင်​တော့ ​ကို​ညွှန်း​ချင်​တဲ့ ​လင့်​လေး​ကို ​ချိတ်​ပေး​လို့​ရ​သွား​ပါ​ပြီ ..